खाताहरू खोल्नका लागि Best उत्तम अपतटीय बैंकहरू - सिफारिसहरू र सुझावहरू
Best उत्तम देशहरू एक अफशोर बैंक खाता खोल्नका लागि
मान्छे धेरै फरक सल्लाह प्रदान गर्दछ जब यो आउँछ सर्वश्रेष्ठ अपतटीय बैंक खाताहरू। यो होइन किनकि तिनीहरू मध्ये केही आवश्यक रूपमा गलत छन्। त्यहाँ बाहिर विकल्पहरू मात्र छन्। एक व्यक्ति वा कम्पनीको लागि उत्तम बैंकि country देश अर्कोका लागि उत्तम फिट हुन सक्दैन।
यद्यपि त्यहाँ केहि देशहरू छन् जसले अफशोर लगानीकर्ता र क्षेत्रका विज्ञहरूले अरूले भन्दा बढी प्रयोग गर्छन्। यो किनभने बैंकि industry उद्योगले केही देशहरू प्रदान गर्ने सुविधाहरू अरू भन्दा राम्रा छन्। यस लेखमा, हामी केहि राम्रो अन्वेषण गर्नेछौं अपतटीय बैंकिंग देशहरू - र के मा तिनीहरू उत्तम छन्।
कर लाभका लागि उत्तम देश - केम्यान टापुहरू
केम्यान टापुहरूको एक कडा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा छ, विभिन्न प्रकारका ग्राहकहरूलाई वित्तीय सेवाहरूको एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दै। Cmans पनि एक कर आश्रय हो। यो एक शब्द हो कि लगानीकर्ताले एक देशको रूपमा परिभाषित गर्छ जसले विदेशी व्यक्ति र व्यवसायहरूलाई न्यूनतम कर दायित्व प्रदान गर्दछ। यसबाहेक, यसमा राजनीतिक र आर्थिक रूपले स्थिर वातावरण छ, जुन धेरै व्यक्तिहरूको लागि आवश्यक छ।
कुनै प्रत्यक्ष कर नलिएकोले केम्यान टापुहरूलाई अपतटीय बैंकि ofको समृद्ध स्रोत बनाएको छ, केम्यान डट कम भन्छ। पूंजी नाफा, कर्पोरेसनहरू, होल्डहोल्डिंग, सम्पत्ति, पेरोल, वा आम्दानीमा त्यहाँ कुनै करहरू छैनन्। थप रूपमा, त्यहाँ कुनै विनिमय नियन्त्रण छैन, कुनै पनि मुद्रामा टापुहरू भित्र र बाहिर नि: शुल्क कोष स्थानान्तरण अनुमति दिँदै। त्यहाँ कुनै आरक्षित सम्पत्ति आवश्यकताहरू छैनन्।
विश्वमा करहरू धेरै छन्। त्यसोभए, केम्यानहरूले बैंकि off अफशोरको लागि एक आदर्श गन्तव्यको रूपमा आफ्नो उच्च प्रतिष्ठा कमाउन धेरै गरेका छन्। तिनीहरू विश्वमा शीर्ष १० अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्रहरू मध्ये एक हुन्। थप रूपमा, केम्यान टापु बैंकि law कानूनमा उनीहरूका ग्राहकहरूको लागि गोपनीयता खंड पनि समावेश छ। यी टापुहरूले उनीहरूको अपतटीय बैंकि services सेवाहरूको लागि कडा नियामक संरचना विकास गरेका छन्। साथै, तिनीहरू यूरो मुद्रा बजारमा प्रतिस्पर्धी छन्।
यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि, केम्यानले महत्त्वपूर्ण कर लाभहरू प्रदान गर्दछ; धेरै देशहरू, जस्तै अमेरिका र बेलायतले आफ्ना नागरिकहरू र बासिन्दाहरूलाई विश्वव्यापी आम्दानीमा कर दिन्छन्।
धनीका लागि उत्तम देश - सिंगापुर
के तपाईंसँग $ २००,००० वा बढी छ जुन तपाईं अफशो खातामा टाढा राख्न चाहानुहुन्छ? सिंगापुर तपाईको उत्तम विकल्प हुन सक्छ। खाता प्रक्रिया सामान्यतया पर्याप्त सजिलो हुन्छ। धेरै जसो अवस्थाहरूमा, तपाई खाता खोल्न सक्नुहुनेछ जुन कहिल्यै सिंगापुरको भ्रमण बिना नै गर्न सक्नुहुन्छ, सिंग साव बताउँदछन्।
एक कारण मानिसहरू सिंगापुर छनौट गर्नुको कारण यो हो कि यसको सम्पत्ति एक भण्डार हो, सुरक्षित सम्पत्ति भण्डारको रूपमा। देशको बैंकि sector्ग क्षेत्रमा उनीहरूको कडा नियमहरू छन्। यसको मतलब यो हो कि तपाइँको धन राम्रोसँग सुरक्षित छ। उनीहरूको बैंकमा पनि अत्याधुनिक प्रविधि छ। यसले सुरक्षाको साथ साथै तपाईंको सम्पत्तीहरूमा सहज पहुँचको लागि अनुमति दिन्छ।
सिंगापुरले विभिन्न प्रकारको सम्पत्ति प्रबन्धन सेवाहरू, कोषहरू, दलाली घरहरू, र खाताहरू तपाइँको पैसा व्यवस्थापन गर्न प्रदान गर्दछ। सिंगापुरका बजारमा फाइदा लिनका लागि व्यावासायिक प्लेटफार्महरू पनि छन्। थप, यसले तपाईंलाई अमेरिका, ह Hongक Kong, चीन, युरोप, र अधिकका लागि अवसरहरू दिन्छ। खाताहरू विभिन्न मुद्रामा उपलब्ध छन्, उच्च विनिमय दरको झन्झट कम गर्न। सिंगापुरका बैंकहरू पनि कुशल सम्पत्ति व्यवस्थापन टोलीको स्वामित्वमा छन्। यी व्यवसायिकहरू तपाईंलाई तपाईंको पैसाको लागि उत्तम वित्तीय रणनीति फेला पार्न मद्दत गर्न समर्पित छन्।
सिंगापुरमा एउटा ठूलो समस्या यो हो कि विदेशीलाई त्यहाँ बैंक खाता खोल्न गाह्रो हुन्छ। साथै, एक व्यक्तिगत भ्रमण प्रायः आवश्यक हुन्छ। यो विगतमा सजिलो थियो। समय परिवर्तन भएको छ। त्यसकारण धेरै धनी लगानीकर्ताहरूले अब स्विजरल्याण्ड, हाम्रो अर्को छनौट रोज्छन्।
सम्पत्ति संरक्षणका लागि उत्तम देश - स्विजरल्याण्ड
स्विट्जरल्याण्डले लामो समयदेखि पैसा लुकाउनको लागि सबैभन्दा राम्रो अपतटीय बैंकको रूपमा प्रतिष्ठित रहेको छ। यसको एक मुख्य कारण भनेको देशको कडा गोपनीयता कानून हो। तिनीहरू 300०० वर्ष भन्दा पुरानो हो, कसरी स्टफ वर्क्सले वर्णन गर्दछ। स्विस कानूनले तपाइँको सहमति बिना बैंकरहरुलाई तपाइँको खाता को बारे मा कुनै पनि जानकारी खुलासा गर्न निषेध गर्दछ। यस कानूनको उल्ल .्घन गर्ने बैंकरहरूले six महिनासम्म जेल सजाय भोग्न सक्छन्। यसका साथै अधिकारीहरूले तिनीहरूलाई ,50,000०,००० स्विस फ्र्यांकमा जरिवाना लिन सक्दछन्। यस गोपनीयता कानून को एक अपवाद आपराधिक कार्य को मामला मा छ। यसबाहेक कर चोरीबाट बच्न विदेशी कर अधिकारीलाई एक पटक वार्षिक रिपोर्टिंग गरिन्छ।
उत्तम सम्पत्ति संरक्षण योजना तपाईंको घर देशबाट तपाईंको सम्पत्ति विच्छेद गर्दछ; र यसको अदालत कक्षहरू। त्यसो गर्न, तपाईंको खातालाई एक अपतटीय LLC र / वा विश्वासमा समात्नु महत्त्वपूर्ण छ। स्विजरल्याण्डमा गोपनीयता कानून र कुक टापु वा नेविसको सम्पत्ति संरक्षण कानूनहरूले यो सम्भव बनाउँदछ। यदि खाता एक सम्पत्ति सुरक्षा उपकरण भित्र पक्राउ गरिएको छैन, स्थानीय अदालतले दबाब दिन सक्छ खाता हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको कानूनी विपक्षीलाई पैसा हस्तान्तरण गर्न। अर्कोतर्फ सम्पत्ति संरक्षण ट्रस्टहरू, ट्रस्टको रूपमा हाम्रो विदेशी कानून फर्मसँग लगातार ग्राहकहरूको स्वामित्व खातामा स्वामित्व राख्ने सम्पत्ति सुरक्षित छ। थप विवरणको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
सम्पत्ति संरक्षणका लागि बैंकको रूपमा स्विजरल्याण्डको लोकप्रियताको अर्को अर्को कारण भनेको कम जोखिमको लगानीको रूपमा यसको सुरक्षा हो। स्विजरल्याण्डको राजनीतिक र आर्थिक मौसम स्थिर छ। स्विस बैंकर्स एसोसिएसन (SBA) ले बैंकहरू नियमित गर्दछ। स्विजरल्याण्डले ब्याज, लाभांश वा विरासतमा कुनै कर लगाउँदैन, यदि स्वीस कम्पनीले ती नाफा कमाउँदैन। स्विस कानून उच्च पूंजी पर्याप्तताको लागि पनि माग गर्दछ। 2004 सम्म, SBA ले निक्षेपकर्ता संरक्षण सम्झौता परिमार्जन गर्‍यो। यो सम्झौताको ग्यारेन्टी छ कि बैंक असफलताको स्थितिमा, निक्षेपकर्ताहरूले अझै पनि उनीहरूको कानुनी सुअवसर प्राप्त दावीहरू प्राप्त गर्नेछन्।
स्विस बैंकिंग गोपनीयता बारे अधिक
धेरै चोटि ग्राहकहरू, "हामी सोच्दछौं स्विट्जरल्याण्डमा गोप्य रूपमा जान्छु।" सत्य यो हो कि गोपनीयतासँगको समस्या स्विजरल्याण्डमा रहेको बैंकहरूसँग थिएन। समस्या यो थियो कि रहस्यहरू प्रकट गर्ने बैंकहरूको संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि शाखा थियो। त्यसोभए, अमेरिकी सरकारले अमेरिकी शाखालाई दबाब दिन वा लाखौं डलरमा जरिवाना लिन दिन अमेरिकी कार्यालयलाई दबाब दियो। तसर्थ, कानून पालन गर्ने नागरिकका लागि गोप्य कुरा भनेको स्वीस बैंकमा बैंक खाता खोल्नु हो जसमा घर फिर्ता शाखा छैन।
कम्पनीहरूका लागि उत्तम देश - नेविस
यदि तपाईं आफ्नो कम्पनीको अपतटीय स्थानान्तरण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, नेभिस उत्तम विकल्पहरू मध्ये एक हो। यहीँ हामी अपतटीय कम्पनीहरूको लगभग %०% गठन गर्छौं जुन हामीले समावेश गर्छौं। टापुहरूमा धेरै मानिसहरूलाई लोभ्याउने भनेको उनीहरूको सम्पत्ति सुरक्षा प्रावधान, कम लागत र उच्च मापदण्ड हो। यो विशेष गरी नेभिस LLC को लागि सही हो, यसको शक्तिशाली सम्पत्ति सुरक्षा कानूनहरूको कारण। नेविस कम्पनीहरूसँग लचिलो परिचालन संरचना र धेरै कम वैधानिक आवश्यकताहरूको साथ ह्यान्डलिंग हुन्छ। त्यहाँ कुनै थप कर वा नियमहरू छैनन् र वित्तीय सेवा आयोगहरूले उच्च स्तर कायम गर्दछ।
नेविस कम्पनीहरूले कम्पनी मालिकहरू र सेयर होल्डर / एलएलसी सदस्यहरूका लागि ठूलो फाइदाहरू छन्। कम्पनीहरूले अन्य न्यायालयमा वा यसबाट माइग्रेसन गर्न सक्दछन्, साथै अन्य नेविस वा विदेशी कम्पनीहरूसँग एकिकृत गर्न वा मर्ज गर्न सक्दछन्। त्यहाँ नेभिस कम्पनीहरु को शेयर पूंजी को आवश्यकता को लागी कुनै कानून छैन। साथै, लाभांश कम्पनीका निर्देशकहरूले घोषित गर्न सक्दछन्। शेयरधारकहरु संग सुरक्षात्मक प्रावधान छ र एक उचित मूल्य मा कम्पनी बाहिर निस्कन सक्छन्। साथै, नेभिस कम्पनीहरूले विश्वव्यापी स्टक एक्सचेन्जमा आफ्ना सेयरहरू सूचीबद्ध गर्न सक्दछन्। यसले NASDAQ, लन्डन स्टक एक्सचेन्ज, अन्तर्राष्ट्रिय सेकुरिटी एक्सचेन्ज, र अधिक समावेश गर्दछ।
BVI यस श्रेणीका पूर्व विजेता थिए। तर अत्यधिक बर्बिडन्सम रेगुलेशनको साथ, शक्तिहरू - त्यसले प्रभावकारिताको साथ क्षेत्राधिकारमा विशाल "गो टाढा" चिन्ह खडा गरेको छ। आशा छ कि उनीहरू अन्ततः उठ्नेछन् र विश्वभरि अन्य विकल्पहरू छन् भनेर बुझेका हुनेछन्। हुनसक्छ प्रशासनले हालको नियामकहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने छ जससँग व्यवसाय जान्ने ई inकलिंग छ। त्यसोभए, हुनसक्छ उनीहरूले आफ्नो पुरानो चमक फेरि प्राप्त गर्न सक्दछन्।
उच्च ब्याज दरहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ देश - बेलिज
यदि तपाईं उत्तम अफशोर बैंक खाता ब्याज दरहरूको लागि खोजी गर्नुहुन्छ भने, यो सम्भवतः सम्भव छ कि बेलीज त्यो सूचीमा हुँदैन। यसको सट्टामा तपाईको खोजले युक्रेन जस्ता देशहरू देखाउँदछ जुन २०% ब्याज दरमा घमण्ड गर्दछ। राम्रो लाग्दछ, हैन? यसले गर्छ, जबसम्म तपाईं मुद्रास्फीति र बैंक सुरक्षा जस्ता चीजहरूमा विचार गर्नुहुन्न। युक्रेनमा मुद्रास्फीति%%% छ। त्यो २%% को भिन्नता हो जुन यसले गो र बैंकिates दरहरू प्रति एक धेरै कम वास्तविक ब्याज दर दिन्छ। युक्रेनमा दुई ठूला समस्याहरू छन्: यो मनी लाँड्रिंगको केन्द्र हो र युक्रेनको मुद्रा घट्दै गइरहेको छ। यसको मतलव तपाईको पैसा धेरै सुरक्षित छैन, र तपाईले त्यस्तो राम्रो २०% लगानीमा देख्न सक्नुहुन्न।
त्यसोभए बेलिज किन? यस लेखनको रूपमा, बेलीजको वास्तविक ब्याज दर लगभग २.2.3% छ। योसँग २०२० को अन्त्य सम्मको मुद्रास्फीति दर ०.0.8% मात्र छ र २०२१ मा ०..2020% हुने अनुमान छ स्टेटिस्टिया। वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको अन्य देशहरूको तुलनामा यो उच्च ब्याज दर हो। यसमा अमेरिका र क्यानाडा समावेश छ। जे होस्, त्यो २०% छैन, कम मुद्रास्फीति दर यसको लागि बनाउँदछ। यसबाहेक, बेलीज अन्य धेरै फाइदाहरूसहित स्थिर देश हो। ल्यान स्लेडर वर्णन गर्दछ कि बेलीजियन अन्तर्राष्ट्रिय खाताहरू स्थानीय कर वा विनिमय नियन्त्रण प्रतिबन्धको अधीनमा छैन। खातावालाहरूले सबैभन्दा ठूला मुद्राहरूबाट छनौट गर्न सक्दछन्, र बेलीज र अमेरिका बीच विनिमय दर २: १ हो। यो देश पनि उनीहरूको ग्राहकहरूको गोपनीयता कायम राख्नका लागि परिचित छ। यसबाहेक, बेलीजियन अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरू मात्र उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरूको पूरा गर्दछन् - कुनै स्थानीय ग्राहकहरूलाई अनुमति छैन।
सुरक्षाका लागि उत्तम देश - जर्मनी
ग्लोबल फाइनान्सको सब भन्दा सुरक्षित बैंकहरूको सूचीमा, जर्मनीको एउटा बैंकले पहिलो स्थान पायो। ० को सूचीमा कुल छ जनाको लागि जर्मनीले शीर्ष १० मा तीन अन्य स्थानहरू समेट्यो। भुक्तानी, एक जर्मन कम्पनी, जर्मनी संसारको सबैभन्दा सुरक्षित अपतटीय बैंकहरूको लागि स्रोत हुनुको पछाडि ठूलो कारण साझा गर्दछ। उनीहरू भन्छन यो देशको स्थिरता हो; विशेष गरी आर्थिक। यो बचत, जाँच, र हिरासत खाताहरूको लागि एक लोकप्रिय स्रोत हो।
जर्मनी एक आधुनिक र विकसित देश भएकोले, खातावालाहरूले अत्याधुनिक अनलाइन र एटीएम सेवाहरूको पहुँच पाउन सक्नेछन्, २//24। धेरै केसहरूमा, तपाइँ जर्मनीमा खाता खोल्नको लागि उपस्थित हुन आवश्यक पर्दैन। थप रूपमा, खोल्ने र मर्मत लागत सामान्यतया कम कम हुन्छ। केही बैंकहरूले भिसा वा मास्टरकार्ड क्रेडिट कार्ड पाउने विकल्प पनि दिन्छन्। यदि तपाईंलाई यात्रा गर्न मनपर्‍यो भने फाइदाहरू अझ बढी हुन्छन्। त्यो हो, जस्तै यूरोमा खाता हुनु युरोपभरि उपयोगी हुन सक्छ। साथै, केहि बैंकहरूमा नियमित यात्रीहरूको लागि अतिरिक्त सुविधाहरू छन्।
यद्यपि तपाईको मुद्दामा पछाडि आउने छन् भने यो राम्रो ठाउँ छैन। जर्मनीले विदेशी फैसला लागू गर्दछ। त्यसो भए, यदि सम्पत्ति सुरक्षा तपाईंको लक्ष्य हो भने, कतै जानुहोस्।
खाता खोल्नको लागि उत्तम अफशोर बैंक सल्लाह
यी कुनै एक देशमा खाता खोल्ने कठिनाई र देश र बैंक द्वारा खर्चमा फरक पर्दछ। के तपाइँ अर्को कदम चाल्नको लागि तयार हुनुहुन्छ र तपाइँको अफशोर बैंक खाता खोल्न वा अधिक जानकारी प्राप्त गर्न? हाम्रो एक वित्तीय पेशेवरसँग कुरा गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। उनीहरूले यो सुनिश्चित गर्न सक्दछन् कि तपाईको खाताबाट अधिकतम लिईरहनु भएको छ। साथै, हाम्रो कर्मचारीहरूले तपाइँको लेखाकारसँग काम गर्न सक्दछ यो सुनिश्चित गर्न कि तपाइँ उपयुक्त कर कानूनहरू पालना गर्दै हुनुहुन्छ।
इन्भेष्टोपिडियाले अपतटीय खाता खोल्दा दिमागमा राख्नको लागि केहि थप चीजहरू प्रदान गर्दछ। आधारभूत आवश्यकताहरू तपाइँको गृह देशमा खाता खोल्न उस्तै हुन गइरहेको छ। तपाईंलाई व्यक्तिगत जानकारी जस्तै तपाईंको नाम, मिति, जन्म, ठेगाना, नागरिकता, र पेशाको लागि सोधिनेछ। सब भन्दा कडा प्राइभेसी कानूनहरु सहितको देशहरुले यो सोध्छ। यो किनभने यो महत्वपूर्ण छ कि तपाइँको खाता सेट अप गर्दा बैंकले तपाइँको पहिचान प्रमाणित गर्न सक्दछ।
केहि कागजातहरू जुन तपाईंलाई तपाईंको खाताको लागि आवश्यक हुन सक्छ निम्न वस्तुहरू समावेश गर्दछ। उनीहरूले तपाईको चालकको इजाजतपत्र र / वा राहदानी र ठेगानाको प्रमाण अनुरोध गर्दछन्। थप रूपमा, धेरै संस्थाहरूले तपाईंको हालको बैंकबाट वित्तीय सन्दर्भ कागजातहरूको लागि सोध्नेछन्। तिनीहरूले खाताहरू मार्फत अपेक्षित लेनदेनको प्रकृति बारे सोध्न सक्छन्। थप रूपमा, तिनीहरूले तपाईंको पहिचान प्रमाणित गर्न आवश्यक छ। यी एन्टी-मनी लाउन्डरिंग नियमहरू हुन्। बैंकहरू सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् कि कोहीले तिनीहरूको सेवाहरू गैरकानुनी सञ्चालनहरूमा प्रयोग गरिरहेको छैन।
निष्कर्ष - दायाँ बैंक खोज्दै
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, त्यहाँ कुनै पनि आकार फिट छैन। त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन् जब यो देश छनौट गर्न आउँदछ जहाँ बैंक खाता अफशोर खोल्दै। माथि वर्णन गरिएका सबै देशहरूको फाइदाहरू छन् उनीहरू भन्दा 'बेस्टमा।' केहीले घरेलु बैंकहरूको तुलनामा उच्च ब्याज दर तिर्छन्। कुन देश ठीक छ पत्ता लगाउनुहोस्। त्यसो गर्न, तपाईं हाम्रो एक अनुभवी वित्तीय पेशेवरहरूको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। कृपया यस पृष्ठमा सोधपुछ फारम वा फोन नम्बर प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं यी मध्ये कुनै एक विधि प्रयोग गरेर हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए तपाईं अफशोर बैंक खातामा सुरू गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको लागि उत्तम हो।
जब यो तपाईंको वित्तीय तस्वीरको सुरक्षामा आउँदछ र तपाईंको सुरक्षाको योजना बनाउँदछ, यी सुझावहरूलाई दिमागमा राख्नुहोस्। थपको रूपमा, तपाइँ विश्वमा केवल सुरक्षित र सबैभन्दा सुरक्षित वित्तीय संस्थाहरू चाहनुहुन्छ। तपाईले छनौट अधिकार क्षेत्रको आधारमा, यस संगठनसँग सुरक्षित अपतटीय बैंकहरूसँग सम्बन्ध छ जुन स्थिरता र सुरक्षामा अत्यधिक प्रस्ताव गर्दछ।
अफशोर बैंकि or वा अपतटीय बैंकहरूले धेरै बैंकिंग र लगानी संस्थाहरूलाई सन्दर्भ गर्दछ। ती देशहरू र जम्माकर्ताको गृह देश बाहेक अन्य क्षेत्र शाखाहरूमा उपलब्ध छन्। प्राविधिक रूपमा कसैले पनि अपतटीय बैंकलाई विचार गर्न सक्दछ जब यो माथिको मापदण्ड पूरा गर्दछ। यसबाहेक, पेशेवरहरूले सामान्यतया बैंकि institutions संस्थाहरूका लागि सर्त राख्छन् जहाँ उनीहरूमा निक्षेप गोपनीयताको उच्च सम्मान हुन्छ।
उनीहरूको उत्पत्तिबाट, अफशोर बैंकहरू दुबै मिडिया र गृह अधिकार क्षेत्र दुबै द्वारा अनुचित चित्रण गरिएको थियो। यी आरोपहरू कर चोरीदेखि लिएर मनी सुप्री .्ग सम्ममा छन्। तर सावधानीपूर्वक अफशोर बैंकिंग खाताहरूको वास्तविक उद्देश्य जाँच गर्नुहोस्। त्यसोभए केहि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुहोस् कि कहाँ अवैध कोषहरू साँचो राखिएको छ वा "laundered"। यसले स्थितिमा केही प्रकाश दिन्छ। अन्य झूटा आरोपहरू असुरक्षित वातावरण, खराब नियमन, आदि को आलोचना वरिपरि केन्द्रित छ।
फेरि, यी सत्य देखि टाढा हुन सक्दैन। कुनै पनि प्रतिष्ठाको अधिकांश अफशोर बैंक खाता क्षेत्र धेरै परिष्कृत, स्थिर बैंकिंग नियमहरू छन्। यो किनभने यो उनीहरूको राम्रो चासो हो जम्माकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न र राख्न। अधिकारीहरूले जम्माकर्ताको आवश्यकताहरू पूरा गर्न यी नियमहरू लिन्छन्। यी न्यायक्षेत्रहरु धेरै आफ्नो प्राथमिक आर्थिक कारक को रूप मा आफ्नो बैंक मा आयोजित विदेशी पूंजी मा निर्भर छन्। साथै, यी बैंकहरू प्राय जसो उनीहरूको वैदेशिक लगानीको मुख्य स्रोत हुन्।
एक अफशोर बैंक को व्यापक परिभाषा एक कार्यक्षेत्र वा देश मा स्थित बैंक हो जुन निक्षेपकर्ता वा लगानीकर्ता बस्ने क्षेत्र क्षेत्र वा देश भन्दा फरक छ। एक अफशोर बैंकि account खाता होल्डिंगका धेरै फाइदाहरूमध्ये एउटा यो हो कि तिनीहरू प्रायः ट्याक्स हभनमा हुन्छन्। साथै, तिनीहरूसँग कानून छ जुन बैंक खाता धारकलाई पर्याप्त सम्पत्ति सुरक्षा र गोपनीयता बेनिफिटहरू प्रदान गर्दछ। यी न्यायक्षेत्रले पनि प्राय: अपतटीय बैंकि accounts खाताहरूको प्रकारको सन्दर्भमा प्रतिबन्धहरूमा आराम गर्न अनुमति दिन्छ।
त्यहाँ नियमहरू छन् जसले निक्षेपकर्ताहरू वा लगानीकर्ताहरूलाई जोखिम सीमा प्रदान गर्छन्। यसैले, नियामकहरू कसरी बैंकले अधिकतम निक्षेपकर्ताहरूको सुरक्षाको लागि कोषहरू व्यवहार गर्दछ र हेरफेर गर्दछ। ठूला ठूला भए पनि नियामकर्ताहरूले निक्षेपकर्ताहरूलाई बैंकि and र लगानी विकल्पहरूको विस्तृत सरणी दिन चाहन्छन्। यो निक्षेपकर्ताहरुमा नियमन घटाइएको छ।
अधिक लोकप्रिय अपतटीय क्षेत्राधिकार प्रायः कर दायित्वमा पर्याप्त ह्रास प्रदान गर्दछ। जबकि, केहि देशहरूमा, जस्तै अमेरिका जसले विश्वव्यापी आम्दानीमा आफ्ना नागरिकहरूलाई कर दिन्छ। यहाँ हाम्रो उद्देश्यका लागि हामी केवल त्यसमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नेछौं जुन माथिको रूपरेखा अनुसार मात्राको लाभ प्रदान गर्नका लागि प्रमाणित हुनेछ। यी अफशोर बैंकहरू वास्तविक टापु-राज्यहरू जस्तै केम्यान वा च्यानल टापुहरूमा अवस्थित छन्। वैकल्पिक रूपमा, तिनीहरू स्विट्जरल्याण्ड जस्ता ल्यान्ड लक भएका देशहरूमा हुन सक्छन्। स्विजरल्याण्ड एक सय भन्दा बढी वर्ष को लागी कर आश्रय क्षेत्र भएको छ - र टापु राष्ट्रहरु भन्दा लामो।
त्यहाँ स्विस बैंकको गोपनीयता को बारे मा धेरै बकबक भएको छ। तपाईले याद गर्नुहुनेछ, केवल स्विट्जरल्याण्डका बैंकहरूसँग मात्र समस्या छ कि ती बैंकहरू हुन् जसका शाखाहरू रहेका छन् स्विजरल्याण्ड बाहिर। क्रेडिट सुइस र यूबीएसको पर्याप्त अमेरिकी उपस्थिति छ। यसैले, अमेरिकी नियामकहरूले यी बैंकहरूसँग उनीहरूको बाटो पाउन सक्छन्। विशुद्ध रूपमा स्विस स्थानहरूसँग उनीहरूले कडा गोपनीयता कायम राख्दछन्।
हाम्रो सुरुको अनुच्छेदमा उल्लेख गरेझैं, अपतटीय बैंक खाताहरूसँग सम्बन्धित धेरै गलत धारणा छन्। के अफशोर बैंकहरू मनी लाँडरर र अपराधीहरूको हभन छन्? बैंकिंग पढ्नुहोस् मिथकहरू अधिक जानकारीको लागि यस वेबसाइटमा सेक्सन। यस लेखमा, हामीसंग अफशोर बैंक खाता मिथकको बारेमा थप जानकारी छ जुन ध्यानमा राख्नु पर्छ।
कहाँ तपाइँको अपतटीय खाता स्थापना गर्न?
यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईले उचित क्षेत्राधिकार छनौट गर्दा निर्णय लिनुहुन्छ कुन क्षेत्राधिकार एक अफशोर बैंकिंग क्षेत्रको रूपमा प्रयोग गर्ने। अधिकांश अपतटीय क्षेत्राधिकार क्षेत्रका विवेकी, ध्वनि नियमहरू छन्। उनीहरू जम्मा गरीरहेछन् निक्षेपहरू सुरक्षित राख्न र उनीहरूको गोपनीयता कायम राख्न। यद्यपि, केहि करहरु मा आफ्नो फाइदा तौल, जबकि अन्य गोपनीयता मा, र यस्तै।
यद्यपि ती सबैले तुलनात्मक रूपमा गोप्य र सुरक्षित वातावरण प्रस्ताव गर्छन्, बैंकि goals लक्ष्यहरू के हुन् भनेर रूपरेखा राख्न यसले विचार राख्दछ। त्यसो भए तपाईले त्यस्तै कार्यक्षेत्र छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। अफशोर क्षेत्रको एक सानो अल्पसंख्यकले तिनीहरूको बैंकिंग प्रणालीहरूको व्यवस्थापन र विनियमनको कमजोर काम गर्दछ। तर सूचित लगानीकर्ता वा सल्लाहकारले यी आफैलाई वा उनीहरूका ग्राहकहरूको लागि अनुपयुक्त मान्नेछन्। यस बाहेक, यी राम्ररी संगठित र सञ्चालन क्षेत्र अक्सर अवैध जमाकर्ताहरु द्वारा हेरफेर गरिन्छ। तसर्थ, तिनीहरू FATF (वित्तीय कार्य टास्क फोर्स) को सजिलो लक्ष्य प्रमाणित गर्दछ मनी लान्ड्रिंग वा अन्य आपराधिक गतिविधिहरूको लागि।
यहाँ एक सम्बन्धित लेख छ केम्यान टापु बैंकहरू र अर्को
बेलिज बैंकिंग। यहाँ, तपाईं यी दुई लोकप्रिय क्षेत्रको बारेमा अधिक जानकारी देख्नुहुनेछ।
अफशोर बैंक खाताहरूको इतिहास
यो दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य हो कि युरोपियनहरू सधैं तुलनात्मक रूपमा भारीको अधीनमा आएका छन् कर बोझ। यो ब्रिटिश टापुहरूमा जस्तै सत्य थियो जस्तो यो महाद्वीपमा थियो। युरोपियनहरूले उनीहरूको कडा मेहनत गरेको सम्पत्ति र सम्पत्ति घट्ने हेर्ने सम्भावना देखेका थिए। कर सor्कलकको हातको हरेक पकडले उनीहरूको सम्पत्ति लुट्यो। त्यसकारण, महाद्वीप समाधानको लागि पाक थियो।
त्यसपछि एक समाधान आयो। सानो, टापु राष्ट्र राज्य च्यानल द्वीप को रूप मा परिचित एक विचार संग आए। तिनीहरूले निराश निक्षेपकर्ताहरूलाई विश्वस्त गरे कि यसको बैंकमा रहेको निक्षेप छानबिनबाट स्वतन्त्र हुन सक्छ; तसर्थ, भारी हातको कर बोझ। यी सुविधाहरूले धेरै धनी युरोपियनहरूलाई विश्वस्त तुल्यायो। चाँडै यो सेवा फस्टायो। अन्य साना क्षेत्राधिकारहरूले ध्यान लिए। तिनीहरू पनि विदेशी पूंजी आकर्षण गर्ने चुम्बकप्रति सचेत भए र उनीहरूले आफ्नो बैंकिंग संस्थालाई पुन: सुधार गर्न थाले। मुठीभर देशहरूले ध्वनि, व्यावहारिक बैंकिंग नियम र नियमहरू अपनाए। यसैले उनीहरूले लगानीकर्ता र बचतकर्ताहरूको सम्भावित चिन्तालाई कम गरे। अफशोर बैंक चलिरहेको सुरूको लागि बन्द थियो!
र चाँडै नै "अफशोर बैंकिंग" भन्ने शव्द कुनै पनि सानो, हेवन क्षेत्रको पर्यायवाची भयो। उनीहरूले व्यावहारिक नियमहरु संग सुरक्षित, सुरक्षित, गोप्य बैंकि। प्रस्ताव गरे। चाँडै नै बाँकी विश्वहरू पनि "जानेको थियो।" तिनीहरूले यी आश्रयस्थलहरूलाई उनीहरूको आवश्यकताको लागि व्यावहारिक समाधानको रूपमा हेर्न थाल्छन्। अमेरिकीहरू, अफ्रिकीहरू, एशियालीहरू, आदि, यी अपतटीय बैंक खाता असंख्य कारणहरूको असंख्यको लागि उपयोगी पाए। घरमा उनीहरूको बैंक जस्तो नभई यी अपतटीय बैंकहरूलाई नियमित रूपमा राजनीतिक अशान्ति वा आर्थिक कलहको अधीनमा राखिएको थिएन। प्रायः शिक्षित व्यवसायिक मानिसहरु उनीहरुलाई उनीहरुका राजनीतिक र वित्तीय स्थायित्व र सम्पत्ति सुरक्षा बेनिफिटहरुका लागि जान्दथे।
मिडियामा अफशोर बैंकहरू
पछिल्ला बर्षहरूमा, तिनीहरू अधिक प्रयोगमा आएका छन् र यसैले अधिक दृश्यमान छन्। उही समयमा, मिडियाले विदेशी बैंकि accounts खाताहरूको अनुचित चित्रण गरेको छ। साथै, ठूला क्षेत्राधिकारले तिनीहरूको प्रतिष्ठालाई आपराधिक भूमिगतको stomping आधारहरूको रूपमा विकृत गर्दछ। यी उच्च-कर देशहरू र उच्च शुल्क बैंकहरूले उनीहरूलाई अवैध रूपमा प्राप्त सम्पत्तिहरूको लागि एक वास्तविक आश्रयको रूपमा चित्रित गर्छन्। उनीहरूले मनी-लन्ड्रिंग योजनाहरूको लागि रोजाइको स्थानको रूपमा चित्रित गर्ने प्रयास गर्छन्।
पैसाको हिसाबले लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताहरू लामो समयदेखि जान्दछन् कि यी पूर्वाग्रहहरू सत्यबाट थप हुन सक्दैनन्। उनीहरूलाई थाहा छ कि अफशोर बैंकहरू सम्पत्तिहरूको लागि उल्लेखनीय प्रभावकारी आश्रयस्थलहरू हुन सक्छन्; सुरक्षित, सुरक्षित, गोपनीयता को आवश्यकता कोषहरूको लागि बलियो गढको रूपमा। साथै, तिनीहरू जान्दछन् कि यी बैंकहरूले उनीहरूको रकमहरू सुरक्षित गर्न सक्दछन्। त्यो हो, तिनीहरू आफ्नो घर मा नागरिक, आर्थिक, वा राजनीतिक कलह को खतराबाट सम्पत्ति आश्रय। आज अफशोर बैंकहरूले सम्झौताको अन्त्य गर्न जारी राख्दछन्। तिनीहरू सुरक्षित, गोप्य आश्रयहरू प्रदान गर्न जारी राख्छन्। उनीहरूले अनुचित नियमन र कराधानको जोखिमबाट कोष जोगाउन को लागी रिफ्यूज प्रदान गर्छन्।
धेरै एक भेदभावकर्ता निक्षेपकर्ताले सुरक्षित, गोप्य र कम कर वातावरणको फाइदा उठाएका छन्। एक अफशोर बैंकि account खाताले भनेको कुरा के हो। अनावश्यक पानीमा उफ्रिनु भन्दा पहिले आफ्नो लक्ष्यहरूको मूल्या assess्कन गर्न सक्षम र अनुभवी एजेन्टसँग उनीहरूसँग छलफल गर्न महत्त्वपूर्ण छ। एक अपतटीय बैंक खाता स्थापना गरेर प्रदान गरिएको धेरै निर्विवाद लाभहरू छन्। दायित्व र गोपनीयता देखि एक सुविधाजनक बैंकिंग स्थान प्रदान गर्न को लागि निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताहरु बीच उनीहरुको प्रतिष्ठा बढ्दैछ। यसबाहेक, अफशोर बैंकहरू सम्पत्ति सुरक्षा, कर घटाउने (तपाईंको अधिकारक्षेत्रमा निर्भर गर्दछ), र उत्कृष्ट जम्मा गरिएको गोपनीयताको लागि यस कडा कमाएको प्रतिष्ठाको साथ जारी रहनेछ।
अन्तिम अपडेट जनवरी,, २०२१ मा